Banyere JDL - JDL Global Environmental Protection, Inc.
Mmiri na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịgbanwe onwe ya na ọnọdụ mpụga, n'otu oge ahụ, mmiri dị ọcha ma dị mfe. JDL na-akwado ọdịbendị mmiri, ma nwee olile anya itinye njirimara na-agbanwe agbanwe na nke dị ọcha nke mmiri na echiche nke ịmịcha mmiri, ma mepụta usoro ọgwụgwọ mmiri na-agbanwe n'ime usoro mgbanwe, nchekwa akụ na obibi, ma nye azịza ọhụụ maka ụlọ ọrụ ọgwụgwọ mmiri mmiri.
JDL Global Environmental Protection, Inc., nke dị na New York, bụ enyemaka nke Jiangxi JDL Environmental protection Co., Ltd. (ngwaahịa ngwaahịa 688057) Dabere na teknụzụ FMBR (Facultative Membrane Bio-Reactor), ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ nke mmiri mmiri. ọgwụgwọ imewe & alo, mmiri mmiri ọgwụgwọ ngo oru ngo, O&M, wdg
Ndị isi ọrụ JDL gụnyere ndị ọkachamara nwere nchedo gburugburu ebe obibi, ndị injinia obodo, ndị injinia eletriki, ndị injinia njikwa ọrụ na ndị injinịa R&D ọgwụgwọ mmiri, ndị tinyeworo aka na ọgwụgwọ mmiri na R&D maka ihe karịrị afọ 30. Na 2008, JDL mepụtara teknụzụ nke Facultative Membrane Bioreactor (FMBR). Site na njirimara nke microorganisms, teknụzụ a na - ahụta mbibi nke Carbon, Nitrogen, na Phosphorus n'otu njikọ mmeghachi omume na obere nsị nke sludge na arụ ọrụ kwa ụbọchị. Teknụzụ nwere ike ịchekwa oke mmiri na nsị nsị nsachasị nsị ọsịse zuru oke, belata oke nsị nke sludge organic fọdụrụ, ma dozie nsogbu "Ọ bụghị na Azụ m" na nsogbu njikwa mgbagwoju anya nke teknụzụ ọgwụgwọ nsị.
Site na teknụzụ FMBR, JDL achọpụtala na ngbanwe na mmelite nke ụlọ ọgwụ na-ekpofu nsị site na akụrụngwa injinịa gaa na akụrụngwa ọkọlọtọ, ma ghọta usoro njikwa mmetọ a na - ezighi ezi nke "Nchịkọta, Na-emeso ma Na-eji Ntugharị Wastewater" JDL n’onwe ya na-etolitekwa usoro ntanetị nke “ofntanetị nke Ihe + Cloud Platform” na “Mobile O&M Station”. N'otu oge ahụ, jikọtara ya na atụmatụ mwube nke "ụlọ ọgwụ na-ekpofu nsị n'okpuru ala ma na-adọba ala n'elu", teknụzụ FMBR nwekwara ike tinye ya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka mmiri mkpofu mmiri nke jikọtara mkpofu mmiri mkpofu na ebe obibi, na-enye azịza ọhụrụ maka gburugburu ebe obibi mmiri nchedo.
Ruo na November 2020, JDL enwetala patent 63 mepụtara. Teknụzụ FMBR nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara emeriwokwa n'ọtụtụ akara mba ụwa, gụnyere onyinye IWA Project Innovation, Massachusetts Clean Energy Center nke Wastewater Treatment Innovation Technology Pilot Grant, na American R & D100, ma gosipụta dị ka "ikike ị ga - abụ onye ndu na - enweghị atụ. ọgwụgwọ nsị na narị afọ nke 21 "site na URS.
Taa, JDL na-adabere na ihe ọhụrụ ya na onye ndu nke isi teknụzụ iji gaa n'ihu nwayọ. E tinyela teknụzụ JDL's FMBR n'ihe karịrị ngwa ngwa 3,000 na mba 19 gụnyere United States, Italy, Egypt na wdg.
Na 2014, teknụzụ JDL nke FMBR meriri IWA East Asia Regional Project Innovation for Applied Research.
2018. JDL's FMBR technology meriri America R&D 100 Awards nke Special gnitionghọta Corporate Social Ibu Ọrụ.
Na Machị 2018, Massachusetts, dị ka ụlọ ọrụ ike zuru ụwa ọnụ dị ọcha, chọrọ ihu ọha n'ihu ọha maka teknụzụ ọgwụgwọ mmiri mmiri na-agbanwe agbanwe gburugburu ụwa iji duzie ndị na-anya ụgbọ elu na Massachusetts. Mgbe otu afọ nke nhọrọ na nyocha siri ike, na Machị 2019, ahọpụtara teknụzụ JDL's FMBR dị ka teknụzụ maka Plymouth Municipal Airport pilot WWTP project.